Ciidamada booliska magaalada Beledweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan oo Xir xiray dhalinyaro.. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ciidamada booliska magaalada Beledweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan oo Xir xiray dhalinyaro..
Ciidamada booliska magaalada Beledweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan oo Xir xiray dhalinyaro..
Ciidamada booliska magaalada Beledweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan waxa ay xireen Saddex qof oo kamid ah dhalinyarada magaalada Baledweyne.
Dhalinyarada la xiray ayaa shalay waxaa ay Beledweyne uga qeyb galeen shir dhalinyaradu ku yeesheen magaalada oo looga hadlay arimaha dhalinyarada kaga aadan siyaasada iyo hormarinta degaanka, waxaana dhalinyarada saddexda ah mid kamid ah tahay haweeneey.
Laamaha ammaanka Magaalada Beledweyne weli wax faah faahin ah kama bixin sababaha keenay in dhalinyarada la xiro, hase yeeshee wararka qaar ayaa waxaa ay sheegene in ay sababtu tahay ka qeyb-galka shirkii ka dhacay Beledweyne.
Ciidamada Booliska Magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan ayaa horay waxaa ay u xir xireen dad isugu jira dhalinyaro iyo ganacsato kuwaas oo taageero u muujiyay Janeraal Xuud oo kasoo horjeeda habka loo dhisay maamulka cusub ee Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle.
Previous articleWarbaahinta taageerta Al-Shabaab oo baahisay sawirrada iyo muuqaallo laga duubay kooxdii weerartay saldhigga Manda-Bay
Next articleJubaland oo noqotay dowlad goboleedkii u horreeyay ee soo dhoweeya Shirka uu shalay iclaamiyay madaxweyne Farmaajo
Musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, HirShabelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeed. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ku...
al-Sisi oo ka digay halista dagaal ka dhasha biyo-xireenka ay...